Travel Archives - ပညာ ပါဝါ
အခိုးခံရတဲ့ I phone ကို Find My IPhone နည်းပညာသုံးပြီး အိမ်အထိပြန်လိုက်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကို မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ မိန်းမချောလေး( Update ေတာ့တင္ထားဖို႔လိုမယ္ေနာ္..)
Too Far | 02/02/2022
အခိုးခံရတဲ့ I phone ကို Find My IPhone နည်းပညာသုံးပြီး အိမ်အထိပြန်လိုက်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကို မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ မိန်းမချောလေး( Update ေတာ့တင္ထားဖို႔လိုမယ္ေနာ္..) ဖုန်းအခိုးခံရတာကို ဘယ်လိုပြန်ရခဲ့တာလဲ လာမေးနေကြလို့ ကြုံခဲ့ရတာလေးကို စေတနာနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါရှင့်။ Find My IPhone ကနေရှာပြီး ပြန်ရခဲ့တာပါ ကံကောင်းချင်တော့ ဖုန်းက IOS နောက်ဆုံး Version
အဖေ့ရဲ့ လက်ဝါး (အရမ်းကောင်းလို့ အချိန်ခဏပေးပြီ းဖတ်ကြည့်ပါ)
Too Far | 05/11/2021
အဖေ့ရဲ့ လက်ဝါး (အရမ်းကောင်းလို့ အချိန်ခဏပေးပြီ းဖတ်ကြည့်ပါ) တခါကကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် မန်နေဂျာရာထူးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်နေသည်။ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် အင်တာဗျူးရန် ခေါ်တွေ့သည်။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးက လူငယ်လေး၏ စီဗွီဖောင်အားဖတ်လိုက်ပြီး သဘောကျသွားသည်။ ထိုလူငယ်လေး၏ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့မှုများမှာ ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိ။ အလယ်တန်းအဆင့်မှသည် ဘွဲ့ရပြီးသည့်တိုင် သူ၏ပညာအရည်အချင်းက ထိပ်တန်းအဆင့်တွင် ရှိနေခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာကြီးတစ်ဦးက
အစားအသောက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အရမ်းကို ချောမောလှပလွန်းတဲ့ ဆိုင်ရှင် ကောင်မလေး နဲ့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်လို့ ဝယ်သူ များနေတဲ့ ဆိုင်လေး
Too Far | 13/10/2021
အစားအသောက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အရမ်းကို ချောမောလှပလွန်းတဲ့ ဆိုင်ရှင် ကောင်မလေး နဲ့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်လို့ ဝယ်သူ များနေတဲ့ ဆိုင်လေး ဒီခေါက်ဆွဲ ကောင်းလွန်းလို့ စားတာလား ဆိုင်ရှင်လေး ချောလွန်းလို့ သွားတာလား ဆိုတဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ် ရဲ့ သီချင်းလို ဗီယက်နမ်က လမ်းဘေဈေးသည် ကောင်မလေး တစ်ယောက် ဟာ အွန်လိုင်း သုံးစွဲသူ
သမ္မတက သေလျှင်သေပါစေဟုဆိုကာ စစ်တပ်တောင်းဆိုချက်ကို မလိုက်လျှောခဲ့
သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကို ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ နုတ်ထွက်ရန် စစ်အရာရှိကြီး ၂ ဦးက ပြောဆိုပြီး မနုတ်ထွက်လျှင် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ ( သမ္မတက သေလျှင်သေပါစေဟုဆိုကာ စစ်တပ်တောင်းဆိုချက်ကို မလိုက်လျှောခဲ့ ) သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကို ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ၍ နုတ်ထွက်ပေးရန် စစ်တပ်ဘက်မှ အရာရှိကြီး ၂ ဦးက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် လာရောက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီး
ထာဝရ သမ္မသက်တမ်းပိုင်ဆိုင်ထားသူ ရှီကျင့်ဖျင်၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်လာ
Too Far | 30/09/2021
ထာဝရ သမ္မသက်တမ်းပိုင်ဆိုင်ထားသူ ရှီကျင့်ဖျင်၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်လာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်တို့က နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများ၊ ကော်ပိုရိတ်များ၊ အိမ်ရာလုပ်ငန်းကြီးများနှင့် အခြားကဏ္ဍများအပေါ် မကြာသေးမီက လုပ်ဆောင်မှုများသည် နိုင်ငံကို နောက်ထပ်ရောက်လာမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် လုံခြုံမှုမရှိသော၊ အန္တရာယ်ရှိသော နေရာတစ်ခုဖြစ်လာစေကြောင်း မီဒီယာသတင်းတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကို ဖိနှိပ်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်က
ကမ္ဘာ့အရေးရှင်းတမ်း တရားခံ ဘယ်သူတွေလဲ…?[အမြင်ကျယ်အသိတိုးကြပါစေ]
Too Far | 27/09/2021
ကမ္ဘာ့အရေးရှင်းတမ်း တရားခံ ဘယ်သူတွေလဲ…?[အမြင်ကျယ်အသိတိုးကြပါစေ] တကယ်တော့ အတ္တကြီးတဲ့ကမ္ဘာ့ခရိုနီသူဌေးကြီးအချို့ဟာ နိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရတွေကို ဝင်ချုပ်လို့ခုလိုဖြစ်တာပါ။ သူတို့က ကမ္ဘာစစ်တွေကိုလည်း ဖြစ်အောင်ကစားနိုင်သလို ရပ်လည်းပစ်နိုင်ပါတယ်။စစ်မြူတာလည်း သူတို့ပဲ။ ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးအသိုင်းဝိုင်းအားလုံးက အသုံးတော်ခံ က’ပြရတဲ့သဘောပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကစားကွက်ခင်းသလို အခုမရတော့ပါဘူး။ အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေ ဖြစ်သွားလို့ပါ…. နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာငတုံးအစိုးရတွေကြောင့် အတ္တကြီးတဲ့ကမ္ဘာ့ခရိုနီသူဌေးကြီးအချို့ရဲ့ ငွေဝယ်ကျွန်တွေ ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ။ယခု အဲ့ဒီသူဌေးတွေကို Q17 က ဖြိုနေပါတယ်။
စကစကို အချိန်ဆွဲပေးနေခြင်းနောကွယ်က အကြောင်းအရင်း နှင့် အာဆီယံက ပြည်သူ့အစိုးရကို မကြိုက်ရတဲ့ နောက်ကွယ်
စကစကို အချိန်ဆွဲပေးနေခြင်းနောကွယ်က အကြောင်းအရင်း နှင့် အာဆီယံက ပြည်သူ့အစိုးရကို မကြိုက်ရတဲ့ နောက်ကွယ် အာဆီယံက မင်းအောင်လှိုင်ကိုပဲကြိုက်တယ် ၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမကြိုက်ဘူး..ဘယ်ကြိုက်မလဲ.. ဒီအဘွားကြီးက ငါးနှစ်ကာလအတွင်းမှာ အာဆီယံမှာ GDPအများဆုံးတိုင်းပြည်အဖြစ်နဲ့ သူတို့အားလုံးကို ကျော်တက်ပြသွားခဲ့တာကိုး..(ပုံတွေကိုကြည့်) နှစ်စဉ်GDP ratingက 7နီးပါးနဲ့ အထက်…အာရှကျားပေါက် ဗီယက်နမ်ကိုတောင် Knock outလုပ်ကျော်တက်နိုင်ခဲ့လို့ World Bank ၊ ADB
ကျောင်းဆရာမမှသည် တော်လှန်ရေးသမားဘဝသို့ ကူးပြောင်းသွားသူနှင့် မေးမြန်းခန်း ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
Too Far | 24/09/2021
ကျောင်းဆရာမမှသည် တော်လှန်ရေးသမားဘဝသို့ ကူးပြောင်းသွားသူနှင့် မေးမြန်းခန်း ( ဗီဒီယိုဖိုင် ) “ကျွန်မတို့က လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်တာလေ ၊အဲ့တာအတွက် တိုက်ပြီးယူမှ ရမယ်ထင်လို့ PDF ထဲကို ဝင်ခဲ့တာပါ” ဒီး‌မော့ဆိုမြို့နယ်တွင် ပညာရေးဝန်ထမ်း ၁၅၀၀ခန့် ရှိသည့်အနက် ၁၃၀၀ခန့်က အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ပြုလုပ်ကြပြီး PDF ထဲ ဝင်သူများ